Fampiharana fakan-tsary 10 ilaina amin'ny findainao | Androidsis
Ny fampiharana fakantsary 10 tsara indrindra ho an'ny Android
Miaraka amin'ny rehetra ireo fakantsary mahatalanjona Amin'izay iandraiketanay amin'ny Android tato ho ato dia fotoana tokony hampiharihary ireo fampiharana 10 tsara indrindra anananay mba hitrandrahana tanteraka ny sary avy amin'ny fitaovantsika Android.
Manaraka, ho hitanao ny fampiharana fakantsary tsara indrindra fa amin'izao fotoana izao dia ao amin'ny Play Store, manomboka amin'ny fakan-tsarimihetsika Google maimaim-poana, ka mety ho Camera FV-5 miaraka amin'ireo fanaraha-maso ireo, na ilay Camera51 izay tsy fantatry ny maro, fa manana ny haitao famantaran-tsary ho an'ny toerana tsara indrindra azo trandrahana.
5 Fakan-tsary fakan-tsary
6 Fakan-tsarimihetsika tsaratsara kokoa
7 Open Camera
9 kabary tsara lahatra
10 Fakantsary fx
Su fahatsorana ao amin'ny interface interface Io no toerana misy ny heriny lehibe indrindra mifandraika amin'ny hafa ary hita maimaimpoana amin'ny Play Store izy io.
Manana safidy ianao mifantoka amin'ny zavatra lavitra mba ahafahana manao blur effet any aoriana izay mety tena tsara amin'ny sary sasany. Tsy azontsika hadino ihany koa fa mifanaraka amin'ny Photo Sphere izy io hahazoana sary 360.
Iray amin'ireo fampiharana azontsika antsoina an'ny matihanina indrindra izay ananantsika ao amin'ny Play Store. Araraoty ity API vaovao ity ho an'ny fakantsary Android 5.0 Lollipop, ka raha manana fitaovana Nexus ianao dia azonao atao ny manararaotra azy tanteraka.
Raha tsy mandeha ny fanitsiana mandeha ho azy dia azonao atao ny miditra a fanaraha-maso isan-karazany mba hampitomboana ny sary amin'ny telefaona Android. Tena ilaina raha mpitia sary ianao.
Manam-pahaizana manokana momba ny kalitaon'ny sivana ary ho fanatsarana ny sary nalaina tamin'ny fakan-tsary finday. Azonao atao ihany koa ny misafidy ny hizara ny sarinao amin'ireo mpampiasa maro kokoa ary hanome fifehezana fanovana avo lenta.
Una karazana hybrid eo anelanelan'ny atao hoe fampiharana fakan-tsary sy asa sosialy sasany hanasongadinana.
Camera51 dia iray amin'ireo tsy fantatra, saingy tsy midika izany fa tsy manana kalitao. Ny kalitaony lehibe dia ny hikarakara azy ireo fandinihana ny seho mba hampisehoana hoe iza no teboka ahafahan'ny telefaona maka sary tsara indrindra.
Tsotra toy ny ampifanaraho ny kisary smartphone miaraka amin'ny zoro mahitsizoro hita eo amin'ny efijery, hanindriana ny bokotra fanidiana. Camera51 dia mampiasa teknolojia fanekena sary hahazoana antoka fa «fitsipiky ny fahatelo«, Ka ny fananganana ny sary dia hihatsara amin'ny fampiasana ity fampiharana ity.
Camera51 - fakantsary marani-tsaina kokoa
Ity fampiharana ity dia toy ny niantsoana ny fanaraha-maso an-tanana izay azo raisina amin'ny telefaona Nexus miaraka amin'izany API fakan-tsary vaovao izay tonga tao amin'ny Android 5.0.
Azonao atao ny miditra amin'ny fanaraha-maso ny hafainganan'ny fitifirana, ISO, halaviran'ny fifantohana, fifandanjana fotsy, fanonerana ny famandrihana ary inona no fahaizana maka sary amin'ny endrika RAW. Ny iray amin'ireo hatsarany kely dia ny hafainganana sy ny fahombiazan'ny fampiharana.
Developer: Geeky Dev Studio
Fakan-tsarimihetsika tsaratsara kokoa
iray hafa izay manolotra fanohanana ny Saripika RAW, fa amin'izao fotoana izao dia mbola voafetra ihany ireo izay mampiasa ny fakantsary API amin'ny fitaovana Nexus.
Toy ny teo aloha, manolotra fanaraha-maso manual ho an'ny fifantohana, haingam-pandeha ary fifandanjana fotsy. Manana toetra tsara toa azy isika ny panoramasanao 360 degre hatramin'ny 100 MP.
Una fampiharana fakan-tsary afaka tanteraka tsy misy fividianana rindrambaiko toa ilay teo aloha. Tsy manome fanohanana RAW izy io, fa manana endri-javatra tsara ho an'ny fifehezana ny fifantohana, ny hafainganan'ny shutter ary ny ISO.
Azonao atao koa ny miditra a safidy fanamafisana mandeha ho azy sary ho iray amin'ireo safidinao tsara indrindra. Ary inona no holazaina fa manome fanohanana ny Lollipop API izy.
Iray izay efa ela teto amintsika ary novidin'i Google ho an'ny sivana mahafinaritra be io. Ireo no kalitao lehibe indrindra ary azontsika atao ny milaza fa miatrika zavatra mitovy amin'ny VSCO Cam isika, na dia tsy misy izany fahafaha-manao izany ho an'ny tambajotra sosialy aza.
Fampiharana tonga lafatra ho azy sary namboarina sy ireo sivana izay mety ahitanao ny sasany amin'ireo fampiharana Google sasany.
kabary tsara lahatra
Ary tsy afaka jerentsika tsy misy fampiharana ny selfies. Ireo sary ireo dia lamaody tokoa Manana ny sakaizany akaiky indrindra ho fampiharana Retrica izy ireo, safidy matotra ho an'ireo tia an'ity karazana sary ity.
Anisan'ireo fahaizany sivana mihoatra ny 100 ary ny fahaizana atolotra azy amin'ny fanaovana collage. Ny interface tsotra dia manamora ny fitifirana selfie miankavia sy miankavanana.
Retrica - Ilay efitrano fanivanana voalohany
Niaraka taminay hatramin'ny naha-OS finday malaza an'ny Android. ny safidy maro isan-karazany ataovy iray amin'ny olo-masina sy famantarana ho an'ny fitaovana Android io.
Azontsika lazaina izany tsy manana na inona na inona izy ary ny fanamafisany lehibe dia ny zavatra niainany nandritra ny taona maro tao amin'ny Android. Fampiharana mahomby izay mamaly tsara amin'ny lafiny rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana fakantsary 10 tsara indrindra ho an'ny Android
Azoko ajanona ve ny telefaona mandritra ny alina?